Inokundinceda Njani IBhayibhile?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla YaseVietnam Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBolivia Intetho Yezandla yaseBritani Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseMzantsi Afrika Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yaseQuebec Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Iban Isi-Ibanag Isi-Ibinda Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Irish Isi-Isoko Isi-Itali IsiAbbey IsiAbkhaz IsiAbui IsiAcholi IsiAlbania IsiAlur IsiArabhu IsiArmenia IsiAssamese IsiAttié IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBambara IsiBaoule IsiBashkir IsiBasque IsiBassa (saseCameroon) IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBelize Kriol IsiBengali IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBoulou IsiBulgarian IsiBété IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChavacano IsiChichewa IsiChin (sesiHakha) IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitonga (SaseZimbabwe) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChopi IsiChuukese IsiChuvash IsiCibemba IsiCinamwanga IsiCinyanja IsiCreole SaseBissau Guinea IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDayak Ngaju IsiDigor IsiDrehu IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFaroese IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGalician IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiGuéré IsiHausa IsiHebhere IsiHerero IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiJula IsiKabiye IsiKabuverdianu IsiKabyle IsiKachin IsiKannada IsiKaren (SaseS'gaw) IsiKazakh IsiKazakh (sesiArabhu) IsiKekchi IsiKhana IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKipende IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKonkani (saseRoman) IsiKorea IsiKosrae IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLenje IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLomwe IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMarshallese IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMixe IsiMizo IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNahuatl (saseCentral) IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNavajo IsiNdau IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgabere IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNyaneka IsiNyungwe IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiOtomi (SaseMezquital Valley) IsiPalau IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiPunjabi (SaseShahmukhi) IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuiche IsiQuichua (SaseChimborazo) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiQuichua (SasePastaza) IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (Macedonia) Cyrillic IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiRomany (saseMacedonia) IsiRotuman IsiRunyankore IsiRutoro IsiSamoa IsiSangir IsiSango IsiSena IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSunda IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTamil IsiTandroy IsiTankarana IsiTarascan IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTiv IsiTlapanec IsiTojolabal IsiTongan IsiToraja IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUighur (sesiCyrillic) IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiValencian IsiVenda IsiVezo IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYacouba IsiYoruba IsiZande IsiZapotec (saseLachiguiri) IsiZulu isi-Igbo isiGokana isiWallisian isiZapotec (saseIsthmus)
IBhayibhile ithi: “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo.” (2 Timoti 3:16) Ukuba oku kuyinyani, iBhayibhile inokunika ulwalathiso oludingayo.
Khawucinge ngoku: UDavid uqhuba kwindawo apho kungekho nenye into ayiqhelileyo. Indlela nemiqondiso yayo ibonisa ukuba akakho kwindawo ebefanele ukuba ukuyo kwaye uyaqonda ukuba ulahlekile. Umele ukuba ujike kwindawo ebemele angajiki kuyo.
Ukuba ubunguDavid, ubuza kuthini?
Usenokwenza enye yezi zinto:
Ujonge imaphu, okanye usebenzise iGPS.
Uqhubeke uqhuba ngethemba lokuba uza kude uyifumane le ndawo uya kuyo.
Kucacile ukuba uC ngoyena ungenakukunceda kangako.
Eyona ingakunceda kunale yokuqala nguB. Ngapha koko, uza kuhlala unayo imaphu neGPS de ufike apho uya khona, zikuncede endleleni.
IBhayibhile inokukunceda ngendlela efanayo!
Le ncwadi iyeyona ithengwayo
ingakubonisa indlela kwiingxaki zobomi
ingakunceda uzazi uze ube ngumntu obhetele
ingakubonisa indlela yokuba nobona bomi bumnandi
IPHENDULA EYONA MIBUZO IBALULEKILEYO EBOMINI
Xa siqala ukuthetha, siye sibuze imibuzo.
Kutheni isibhakabhaka siluhlaza?
Zenziwe ngantoni iinkwenkwezi?
Njengoko sikhula siye sibuze ngezinto ezenzekayo.
Kutheni kusenzeka izinto ezimbi?
Ungathini ukuba kunokuthi kanti kudala zikho iimpendulo zale mibuzo eBhayibhileni?
Abantu abaninzi bathi iBhayibhile izele ziintsomi, iphelelwe lixesha, okanye kunzima gqitha ukuyiqonda. Kodwa ngaba nyhani ingxaki iseBhayibhileni, okanye ikoko abantu bakuvileyo ngeBhayibhile? Ngaba kunokwenzeka ukuba baxelelwe into engekhoyo ngeBhayibhile?
Ngokomzekelo, abantu bacinga ukuba iBhayibhile ithi nguThixo olawula ihlabathi. Kodwa inokwenzeka njani loo nto? Eli hlabathi alilawuleki! Lizele ziintlungu nokutsala nzima, ukugula nokufa, indlala neentlekele. UThixo oluthando angazenza njani izinto ezinje?
Ngaba uyafuna ukwazi impendulo? Ungothuka xa unokuva oko iBhayibhile ikutshoyo ngokuba ngubani olawula ihlabathi!
Inoba uye wabona ukuba amacebiso akule ncwadana athathwe eBhayibhileni. AmaNgqina kaYehova akholelwa nyhani ukuba iBhayibhile inolwalathiso olunokuthenjwa, ngenxa yokuba ‘iphefumlelwe nguThixo kwaye iyingenelo ekufundiseni, ekohlwayeni, ekulungelelaniseni izinto.’ (2 Timoti 3:16, 17) Ngoko ke umele uyifunde kakuhle le ncwadi yakudala—kodwa enamacebiso asasebenzayo nanamhlanje!
Bukela ividiyo ethi Kutheni Ufanele Ufunde IBhayibhile? ku-www.jw.org/xh
Text Iimpapasho onokuzikhuphela Imibuzo Eli-10 Yolutsha Iyaphendulwa
Audio Iimpapasho ezirekhodiweyo onokuzikhuphela Imibuzo Eli-10 Yolutsha Iyaphendulwa